Ọzụzụ Ahịa Dijital | Martech Zone
Sunday, Jenụwarị 24, 2021 Sunday, Jenụwarị 24, 2021 Douglas Karr
Ihe odide ahụ dị na mgbidi na ụlọ ahịa ahịa dijitalụ ka ọrịa ahụ gbasaa, mkpọchi kụrụ, akụ na ụba wee gbanwee. Edere m na LinkedIn n'oge ndị ahụ na ndị na-ere ahịa kwesịrị ịgbanyụ Netflix ma kwadebe onwe ha maka nsogbu ndị na-abịanụ. Fọdụ ndị mere… mana, ọ dị nwute na ọtụtụ emeghị. Ndị layoffs na-aga n'ihu na-adọta site na ngalaba ahịa na mba ahụ.
Ahịa ahịa dijitalụ bụ ọrụ na-adọrọ mmasị ebe ị nwere ike ịchọta ndị ahịa abụọ dị iche iche nwere ezigbo nka. Otu nwere ike ịbụ ọkachamara ọkachamara nwere ike ịmepụta nka ọhụụ na-ekwupụta ngwaahịa na ọrụ nke ụlọ ọrụ ahụ nke ọma. Onye ọzọ nwere ike ịbụ ọkachamara na teknụzụ nke na-aghọta nchịkọta ma nwee ike ịzụlite mkpọsa ahịa dijitalụ nke na-eme mgbalị mgbasa ozi nke ụlọ ọrụ ahụ. Nzọta nke nka na ọkara ụbọchị ọrụ nke ọ bụla n'ime ndị a nwere ike ọ gaghị amachaghị ma ọlị… mana ha ka maara ọrụ n'ọrụ ha.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịbawanye uru gị na nzukọ gị ugbu a ma ọ bụ kwadebe onwe gị maka ọnọdụ ịre ahịa dijitalụ gị na-esote, aga m akwado ịkwado onwe gị n'ọzụzụ ọkachamara ọkachamara.
N'uche nke m, ndị ahịa ahịa dijitalụ nwere ọgụgụ isi kachasị m rụọ ọrụ nwere nghọta miri emi banyere ụfọdụ ọwa na ndị na-ajụ ase, mana ghọta nke ọma otu esi eme ndị ọzọ ihe ha nwere ike ọ gaghị enwe nka na. Onwe m, ekwenyere m na nka m nwere na mbido, ọdịnaya, ọchụchọ, na mmekọrịta ọhaneze emeela ka m bụrụ onye ahịa dijitalụ na-aga nke ọma kemgbe ọtụtụ afọ.
Otu mpaghara anaghị m eme ka à ga-asị na m nwere aka ọrụ bụ mgbasa ozi na teknụzụ mgbasa ozi. Aghọtara m ihe ndị dị mgbagwoju anya mana mara na usoro mmụta m ga-esi wuo nka bụ ihe siri ike n'oge a na ọrụ m. Yabụ, mgbe achọrọ m ịnweta mgbasa ozi, m na ndị mmekọ na-arụ ọrụ kwa ụbọchị na atụmatụ ndị a kwa ụbọchị.
Na kwuru… M ka kwesịrị ịghọta otú na mgbe ahu nagide mgbasa ozi dị ka akụkụ nke mkpokọta digital ahịa atụmatụ. Na nke ahụ chọrọ ọzụzụ ịzụ ahịa dijitalụ. Ọ nwere ike iju ọtụtụ n'ime gị anya, mana m na-aga ọmụmụ ihe oge niile, na-aga webinars, ma na-eri ọdịnaya iji gbalịa ịnọ n'ihu. Industrylọ ọrụ a na-aga ọsọsọ ma ị ga-ewepụta oge iji nọrọ n'elu.
Etu esi abia ahia dijitalụ
Site na mmemme nanodegree nke Udacity, ndị bịaranụ nwere ike nweta nkọwapụta isi nke ihe niile achọrọ iji bụrụ ahịa ahịa dijitalụ na-aga nke ọma. Ha ga-amụta ịmepụta ọdịnaya ahịa, jiri mgbasa ozi mmekọrịta iji mee ka ozi gị dịkwuo elu, mee ka achọpụta ọdịnaya na ọchụchọ, na-eme mkpọsa mgbasa ozi ma kpọsaa na Facebook. Ọzọkwa, mụta otu ngosipụta na mgbasa ozi vidiyo si arụ ọrụ yana otu esi azụ ahịa na email, ma tụọ ma bulie ya na Google Analytics.
Ọzụzụ Digital Marketer si Udacity
Usoro ahụ ga-ewe ihe dị ka ọnwa 3 ma ọ bụrụ na ịrara 10 awa n'izu ma gụnye ya:
Isi ahia ahia - N'ime usoro a, anyị na-enye gị usoro iji nyere gị aka ịhazi ma hazie usoro ịre ahịa gị. Anyị na-ewebata gị na ụlọ ọrụ atọ na-apụta na mmemme Digital Marketing Nanodegree dị ka ihe atụ nke otu esi etinye ihe ị mụtara na ọnọdụ B2C na B2B.
Atụmatụ Ahịa Ọdịnaya - Ọdịnaya dị na isi azụmaahịa niile. N'ime usoro a, ị mụtara otu esi ahazi azụmaahịa ọdịnaya gị, otu esi emepe ọdịnaya nke na-arụ ọrụ nke ọma maka ndị na-ege gị ntị, yana otu esi tụọ mmetụta ya.
Social Media Marketing - Social media bụ ike ọwa maka ahịa. N'ime usoro a, ị na-amụtakwu banyere isi nyiwe mgbasa ozi mmekọrịta, otu esi ejikwa ọnụnọ mgbasa ozi gị, yana otu esi emepụta ọdịnaya dị mma maka ikpo okwu ọ bụla.
Mgbasa ozi mgbasa ozi - kwụsị mkpọtụ na mgbasa ozi mmekọrịta nwere ike ịbụ ihe ịma aka, na mgbe ụfọdụ, ndị na-ere ahịa ga-eji usoro ịzụ ahịa mgbasa ozi na-akwụ ụgwọ iji mee ka ozi ha dịkwuo elu. N'ime usoro a, ị mụtara banyere ohere maka mgbasa ozi ezubere iche na mgbasa ozi mmekọrịta yana otu esi eme mkpọsa mgbasa ozi nke na-emetụta ndị na-ege gị ntị.
Search Engine Optimization (SEO) - Nchọgharị ọchụchọ bụ akụkụ dị mkpa nke ahụmịhe n'ịntanetị. Mụta otu esi ebuli ọnụnọ njin ọchụchọ gị site na mmemme na saịtị na saịtị, gụnyere otu esi emepe listi isiokwu gị, lelee weebụsaịtị UX gị na imewe, ma mepụta mkpọsa njikọta.
Azụmaahịa Ngini na Mgbasa ozi Google - imchọpụta ọhụhụ na nsonaazụ ọchụchọ engine bụ akụkụ dị mkpa nke ahịa dijitalụ. Kwado ịchọta site na Nchọpụta Nchọpụta Injin (SEM) bụ ụzọ dị irè iji mezuo ebumnuche ahịa gị. N'ime usoro a, ị mụtara otu esi emepụta, kpue, ma bulie mgbasa ozi mgbasa ozi dị irè site na iji Mgbasa ozi Google.
Ngosipụta Mgbasa Ozi - Ngosiputa mgbasa ozi bu ngwa ahia ahia di ike, nke ohuru site na nyiwe ohuru dika mobile, ohere vidio ohuru, na imewanye ihe. N'ime usoro a, ị mụtara otu esi egosipụta ọrụ mgbasa ozi, otu esi azụta ya ma rekwa ya (gụnyere na mmemme mmemme), yana otu esi edobe mgbasa ozi mgbasa ozi site na iji Google Ads.
email Marketing - Email bụ ọwa ahịa ahịa dị irè, ọkachasị n'oge ntụgharị na njigide nke njem ndị ahịa. N'ime usoro a, ị mụtara otu esi emepụta atụmatụ ịre ahịa email, mepụta ma mepụta mkpọsa email, ma tụọ nsonaazụ ya.
Jiri Google Analytics jiri ma bulie elu - Omume na ntanetị nwere ike ịdebe, ya mere enwere ike ị nweta mbọ ị na-agba mbọ ịzụ ahịa dijitalụ gị. N'ime usoro a, ị mụta otu esi eji Google Analytics iji nyochaa ndị na-ege gị ntị, tụọ ihe ịga nke ọma nke nnweta na mbọ gị, nyochaa ntụgharị nke onye ọrụ gị na ebumnuche gị, ma jiri nghọta ndị ahụ mee atụmatụ ma bulie usoro mmefu ego gị.
Udacity si dijital ahịa N'ezie na-etinye ọrụ nke ụwa n'ezie site na ndị ọkachamara na ụlọ ọrụ na ọdịnaya miri emi nke etinyere na mmekorita ya na ụlọ ọrụ kachasị elu.
Ndị nkụzi ha maara ihe na-eduzi mmụta gị ma lekwasị anya n'ịza ajụjụ gị, na-akpali gị, na ịdebe gị n'ụzọ. Ga-enwekwa ike ịmaliteghachi nkwado, nyocha Github pọtụfoliyo, na njikarịcha profaịlụ LinkedIn iji nyere gị aka ịmalite ọrụ gị ma nweta ọrụ dị elu.
Mee atụmatụ mmụta mmụta omenala na-agbanwe agbanwe nke dabara maka ndụ gị ji ọrụ n'aka. Mụọ na ọsọ gị ma ruo ihe mgbaru ọsọ gị na nhazi oge ga-abara gị uru.
Bụrụnụ ndị Ahịa Ahịa
Ngosipụta: Abụ m mmekọ maka Mmemme Digital Marketer nke Udacity.
Tags: ọzụzụ ahia ọdịnayadijital ahịaọzụzụ dijitalụ ahịadigital marketingọzụzụ ịzụ ahịa dijitalụgosipụta ọzụzụ mgbasa ozielearningemail ahia ọzụzụọzụzụ nchịkọta googleahịa isiịzụ ahịa isi ọzụzụnanodegreeọzụzụ n'ịntanetịọzụzụ engine search engineọzụzụ nyocha njikarịcha igweseo ọzụzụọzụzụ mgbasa ozi mgbasa oziọzụzụ mgbasa ozi mgbasa oziudabity